Fampitahana ireo maodely iPad rehetra amin'ny horonan-tsary. Vaovao IPhone
Fampitahana ireo maodely iPad rehetra amin'ny horonan-tsary
Vao tsy ela akory izay dia niresaka momba ny fampitahana inona no amazona eo anelanelan'ny Kindle Fire HDX sy ny iPad Air, fampitahana amin'ny toerana misy azy ireo (mariho ny mahatsikaiky) nanomboka teo avy amin'ny iray amin'ireo orinasa izay manamboatra ny iray amin'ireo fitaovana roa hosedraina tsy izany no tanjona. Ny tena izy dia, araka ny niharihary (satria tsy hitora-bato an-tampon-trano izy ireo), ny Kindle Fire HDX nikapoka ny iPad Air tamin'ny lafiny maro. Ary manohy amin'ny fampitahana izahay.
Amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny a Video navoakan'ny bilaogy, miavaka amin'ny tontolon'ny Apple, iClarified. Lahatsary izay manandrana ny hafainganan'ny boot an'ny (tsy toy ny efa noresahintsika teo aloha) iPads rehetra navoaka hatramin'ny ny daty- Avy amin'ny taranaka voalohany ka hatramin'ny iPad Air. Izy rehetra dia mitovy amin'ny zana-tongotra ary fehezina miaraka amina famantaran-potoana ampandehanana miaraka amin'ny fitaovana rehetra. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no haingana? Aorian'ny hitsambikina dia holazainay aminao ...
Ho an'ny fitsapana dia nampiasana izy ireo modely GSM, izany hoe iPads misy fifandraisana finday fa tsy misy karatra SIM nampidirina. Samy nanana izy rehetra iOS 7.0.4 afa-tsy ny iPad 1 izay nijanona niaraka tamin'ny iOS 5.1.1.
Ny kaontera dia manomboka amin'ny fitaovana rehetra amin'ny fotoana iray Satria izy rehetra dia mifandray amin'ny fotoana iray amin'ny alàlan'ny USB ka manomboka mihodina izy ireo, ary mijanona ao amin'ny fotoana hisehoan'ny efijery hamaha.
Araka ny hitanao, ny filaharan'ny hafainganana dia izao manaraka izao: ny Air's iPad vaovao ary Mini 2, iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad 3, ary farany iPad Mini 1. Mety ho kisendrasendra izany, mahatsikaiky ny fomba nahazoan'ny taranaka 1 sy 2 toerana mahaliana eo amin'ny lafiny hafainganana, mialoha ny fitaovana aoriany.
Ary ianao, Vitanao ve ny mampitaha ny hafainganan'ny ny fitaovanao?.
Loharano - iClarified
Fampahalalana bebe kokoa - Kindle Fire HDX vs iPad Air araka ny Amazon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampitahana ireo maodely iPad rehetra amin'ny horonan-tsary
Magnus dia hoy izy:
Mino mafy aho fa minia mamporisika ny fitaovany i Apple mba hahafahan'ireo vaovao misongadina na tsy tsikaritr'izy ireo talohan'izay ny hafainganan'ny iPhone 4 ary ankehitriny dia hadalana sy miadana izaitsizy ??? ataovy amin'ny iphone 5s ny andranao rehefa esorinao ny iphone 6 na 6s dia ho hitanao !!
Mamaly an'i Magnus
Stanford dia nandefa fandaharam-pandrosoana fampiharana iOS 7 maimaimpoana
PDF Expert 5, mpitantana tahirin-kevitra PDF vaovao avy amin'ny Readdle